आरामदायक, जीन्स र स्यान्डल संग बेजिया
मारिया vazquez | 13/09/2021 18:00 | मैले के लगाउने?
शरद approachतु आउँदैछ तर त्यहाँ अझै पनी धेरै दिनहरु छन्, यदि ग्रीष्मकालीन छैन, सुखद तापमान संग कि हामी अझै पनी आनन्द उठाउनु पर्छ। हामी हाम्रो लगाउन जारी राख्न सक्छौं मनपर्ने गर्मी कपडा र उनीहरु बाट जीन्स र स्यान्डल कि हामी आज प्रस्ताव गरीरहेका जस्तै शैलीहरु सिर्जना गर्नुहोस्।
यो अझै पनी रेलिगेट गर्न को लागी धेरै चाँडो छ स्यान्डल र ट्यांक माथि, उत्तर मा पनि! यो सम्भव छ कि निश्चित समय मा हामी एक हल्का लामो बाहुला को शर्ट पहने छैनौं, तर हामी ट्यांकी माथिको चाँडै हानिकारक छैन जब हामी दिन को चिसो घण्टा संग व्यवहार गर्न को लागी यी ओभरशर्ट र ज्याकेटहरु मा राख्न सक्छौं।
3 माथिल्लो कपडा
जीन्स एक कालातीत कपडा हो; बर्ष को चार सिजन हामी संगै छौ। हामी मध्ये प्रत्येक हाम्रो मनपर्ने छ र ती हुन् कि हामी जीन्स र स्यान्डल संग आकस्मिक पोशाक बनाउन को लागी बर्ष को यस समयमा दैनिक जीवन को आनन्द उठाउन को लागी प्रयोग गरीनेछ। जे होस् सबै कुरा भन्न को लागी छ, सबै कुराले संकेत गर्दछ कि यो पतन यो सीधा डिजाइन हो कि केन्द्र चरण लिनेछ।
तपाइँ दिनको समयमा के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? यदि तपाइँ यहाँ बाट त्यहाँ सार्न को लागी जाँदै हुनुहुन्छ तपाइँ रुचाउन सक्नुहुन्छ फ्लैट स्यान्डल मा शर्त। यो वर्ष फावडे प्रकार स्यान्डल एक अग्रणी भूमिका भएको छ, यद्यपि हामी सबै उनीहरु संग हिड्ने बानी पर्दैन। यदि तपाइँ यो अन्तिम समूह को हो, तपाइँ कम वा मध्यम एड़ी संग टखने संग जोडिएको पतली पट्टिहरु संग स्यान्डल मा शर्त गर्न चाहानुहुन्छ।
हामी हाम्रो स्टाइल पूरा गर्न धेरै संभावनाहरु छन्। आधारभूत टी शर्ट र sweatshirts उनीहरु आकस्मिक पोशाकहरु जसमा आराम व्याप्त बनाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो सहयोगी बन्नेछ। हो, पट्टा रहित शर्ट, पनी उपयुक्त सामान संग संयोजन यद्यपि तपाइँ एक दस शैली हासिल गर्न सक्नुहुन्छ एक शेरिल जस्तै एक दिउँसो वा रात बाहिर जान को लागी।
Strappy बाली रफल विवरण र संग शीर्ष सेतो पफ आस्तीन ब्लाउज उनीहरु एक अधिक रोमान्टिक रूप प्राप्त गर्न को लागी आदर्श छन्। जबकि यदि तपाइँ एक सादा शर्ट र एक रेनकोट मा शर्त तपाइँ एक तटस्थ रूप, अधिक विवेकी र औपचारिक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र हो, रंगीन फूल प्रिन्ट संग ब्लाउज र शर्ट पनि एक विकल्प हो, शरद को लागी प्रतिरोध को प्रतीक हो कि आउन को लागी।
के तपाइँ जीन्स र जुत्ता संग संगठनहरु को यो प्रकार मनपर्छ? तपाइँको मनपर्ने के हो?
छविहरू - incesincerelyjules, collagevintage, tineandreaa, eladelinerbr, artbartabacmode, ind cindy.octaviany, karinemilyblog, @ frenchstyle.agi, walkinwonderland
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » फेसन » मैले के लगाउने? » आरामदायक, जीन्स र जुत्ता संग